05 | March | 2015 | साहित्य संगालो २०१३
कथा – सम्बन्धका दूरी
Posted on March 5, 2015 by भण्डारी2013
उसलाई आश्चार्य लागिरहेको थियो आज राति ओछ्यान पटक्कै बिझाएन । उठ्दा गर्धन र शीर दुखेको थिएन । हलुङ्गो महसुस गरिरहेकी थिई ऊ । उसले ओछ्यानको तन्ना तनक्क तन्काई । बुट्टेदार तन्नामाथि दुई सिरानीहरुलाई मिलाएर राखि । उसलाई आफ्नो ओछ्यानमाथि बुट्टेदार तन्नाको ताजापन साहै प्यारो लाग्छ । अनि टेबुलमाथिको चाँदीको प्रुेमभित्रबाट फोटो बाहिर निकालि स्वयंवरको ।
उसको झण्डै चार बर्ष अगाडि दिवशसँग बिवाह भएको थियो । दिवशको खान्दानी संस्कारमा घरका महिला वर्गले जागिर खाने चलन थिएन । पढेलेखेको परिवार भएर पनि घरका महिलाहरुले बाहिर काम गर्न सरकारी जागिर खान नपाउने परम्परावादी नियमलाई उल्लङ्गघन गर्ने हिम्मत कसैले गरेका थिएनन् । उसको घरमा बिवाहको प्रस्ताव लिएर आउँदा नै केटाकी माईजुले भनेकी थिईन -“घरमा आएका पाहुनालाई पानी पिउन िदंदा पनि सर्वत जस्तो मिठो हुने गरी दिने सुन्दर केटी चाहिएको छ । बेस्सरी सम्पत्ति छदैछ । आईमाईले कमाउने चलनै छैन । जेठी र माईली बुहारीले पनि बी।ए। एम।ए। पढेका छन् तर घरै सिगांरेर बसेका छन् ।� आफूहरुले जीवन जिउन बेस्सरी गर्नु परेको दःुखको झझल्को शायद मेटिनसकेकोले होला थुप्रो सम्पत्ति छ भन्ने कुराले आमा-बाबु लोभिएर उसलाई बिवाह गरि दिएका थिए त्यस घरमा ।
उसले झण्डै एक बर्ष त पानीलाई सर्वत जस्तै मिठो हुने गरी बाँडि । बिहानै उठ्नु नुहाई -धुवाई सकेर सासुलाई पूजाको तयारी गरिदिनु आफ्नो सिङ्गारपटार गरेर बिहानदेखि रातिको खाना-पिना नसकिन्जेल भान्साभित्रको काममा तल्लिन रहनु उसको दिनचर्या थियो । प्रत्येक दिन बुढा ससुरालाई हेर्न आउने सासु-ससुराका पुराना ईष्टमित्र खेतीबाट आएका हरुवा-चरुवा आफन्त आदिको लस्करै हुन्थ्यो । यति भएपछि घरका बुहारीहरु जति नै पढेका भएपनि भान्साभन्दा बाहिरी कामका लागि निस्कन नै कहाँ सक्थे र यस्तो समय धेरै रहिरहन पाएन । दाजु-भाइबीच व्यवहारमा हानाथाप स-साना कुरामा बढ्दै गएको असमझदारीले दिक्क भएर ससुराले तीनै भाईलाई अलग गरिदिनु भयो । सासु-ससुराले पनि घरको जेठो छोरो नै असल छ भनेर उनैसँग बस्ने निधो गरे । जग्गा निकै थियो तर सबै जग्गामा मोहियानी लागेर आफ्नो भागमा धेरै रहन पाएन । फेरी बुढा ससुराको काजकि्रयामा पनि तेह् जना ब्राम्हणहरुलाई जग्गा नै दान गरिएको थियो । काठमाडौमा पनि आठ रोपनी जग्गा नभएको होईन तर दुईटी छोरीहरुको बिवाहमा धितो राखेर लिएको ऋण समयमा नतिरेकाले लिलामीमा परेको थियो । त्यो ऋण सबै छोराहरुले मिलेर समयमा तिरेका भए राजधानीको त्यत्रो सम्पत्ति लिलामीमा परेर गुमाउनु पर्ने थिएन भन्ने गुनासो ससुराको अझै बाँकी छ ।
दिवश पेशाले अधिवक्ता थिए । मूलघरबाट छुट्टिएको केही महिना पछि नै त्यहाँको बसाई उनलाई असजिलो हुन थाल्यो । वकालतको चर्को आवश्यकता मोफसललाई भन्दा राजधानीलाई छ भन्ने बहानामा आफूलाई राजधानीतिरै सारे । यथार्थत त्यत्ति सजिलो कहाँ थियो र आफूलाई स्थापित गराउन त्यहाँ । निकै समय बितिसक्दा पनि दिवशको वकालत पेशाले गति लिन सकिरहेको थिएन । फलतः व्यवहारमा आर्थिक संकट हावी भएको आभास दुवैमा हुन थालिसकेको थियो । यद्यपी सन्तानको लागि भने खर्च गर्नु परेको थिएन । बिवाह पछि पटक-पटक गर्भ रहेको थियो उसको तर अडिन सकेको थिएन । डाक्टरलाई देखाउँदा औषधि खाएर अझैकेही समय धैर्य गर्न सल्लाह दिएका थिए ।
खान्दनी ढाँचा अनुसार चल्न मधेशको खेतीबाट बर्षमा एकपटक हात लाग्ने सिमित आयले कत्ति नै पो पुग्थयो र दिवशको आम्दानीको स्रोत पनि खासै निश्चित नहुदा संङ्गोलको बसाईको रमझम संझनामा कहिलेकाही आउन थालेको थियो ।
बुबाले घर चलाउनुहुन्थ्यो । तीनै छोराहरुले आम्दानीको केही भाग घरखर्चमा छुट्याउँथे । घर पनि बडेमानकै थियो । अनि सम्पत्तिको भागभण्डा नभएको हुदा आर्थिक अभाव कुन चराको नाम हो कसैलाई थाहा थिएन । त्यसमा पनि सधै कान्छो छोरो भएर खाएको दिवशलाई सपना जस्तो लाग्न थालेको थियो । समय एकैनाशको कहाँ रहन्छ र भाग भण्डासगै पुस्तैनि सम्पन्नता पनि बाँडिन गयो ।
घरको आर्थिक समस्या देखेर धेरै दिनदेखि आफूलाई काम गर्न मन लागेको बारेमा दिवशसँग कुरा राख्न खोजिरहेकी थिई ऊ तर हिम्मत जुटेको थिएन । खान्दानी चलनको हरबखत गर्व गर्ने आफ्नो लोग्ने हुनसक्छ उसको प्रस्तावलाई तुरुन्तै नकार्ने छ । ऊ भित्र डर थियो । “यदि हजुरले अन्यथा नमान्ने हो भने मलाई क्याम्पसमा पढाउने अफर आएको छ के मलाई अनुमति दिनसक्नुहुन्छ “श्रीमानको बोझ घटाउने उदेश्यले एक दिन हिम्मत जुटाएर सोधी उसले । प्रतिउत्तरमा मौनता मात्र छायो ।
आफ्नो क्षमतालाई घरको ढोकाभित्र बन्द गरेर नगर्नु पर्ने दुःख गरेर बस्नु लाचारीको दोस्रो रुप ठान्थी ऊ । तर उसले दिवशकेा अनुमतिलाई धेरै दिन पर्खिई अहँ उसले सहमति जनाएन । परम्परागत मान्यताको खिया लागेको लोग्नेको मानसिकतालाई धिक्कार्न बाहेक अरु के नै गर्न सक्थी र !
पन्ध्र दिन भित्रमा निर्णय नसुनाए अरुलाई नेै स्थान दिईने कुरा क्याम्पस प्रमुखले बताएका थिए । बिचरीले त्यो मौका पनि क्याम्पस प्रमुख आफ्नै नाता पर्ने भएकाले पाएकी थिई । दिवशको अनुमतिको पर्खाइमा तोकिएको दिन बितिसक्न लाग्दासम्म पनि उसले कुनै जवाफ पाईन । ूभोलि बिहानदेखि म पढाउन सुरु गर्दे छु । यो निर्णय मैले घरको आर्थिक बोझ घटाउने बिचारले गरेकी हुँ । हाम्रो भविष्य पनि त छ । मेरो क्षमताले केही गर्न सक्छु भने किन उपयोग नगर्ने � उसले आफ्नो निर्णय सुनाई । “जुन घरकी बुहारी भएर आएकी छौ त्यो घरको संस्कार चालचलनको मर्यादा भित्र रहनु तिम्रो कर्तव्य हो । खान लाउन मैले दिन नसकेका दिन सोचौला ।” दिवश गम्भिर भएर बोल्यो । उसलाई असैह्य भयो । ऊ आफ्नो लोग्नेको तर्कसँग पटक्कै सहमत हुन सकिरहेकी थिईन ।
“स्वावलम्बि हुनुले कुनै पनि घरको मर्यादालाई नकारात्मक आँच पुर् याउँदैन । यदि कसैलाई त्यस्तो लाग्छ भने त्यो मात्र भ्रम हो । दिनभर घरमा निकम्मा भएर बस्न म पटक्कै चाहन्न । बच्चा पनि छैनन् । सकारात्मक भएर सोच्ने हो भने दुवै दम्पत्तिले नोकरी गर्नु सामाजिक प्रतिष्ठाको कुरा पनि हो ।” ऊ आफ्नो अडानमा दृढ रहि । दिवश मात्र सुनिरहेको थियो । दुबैले आफ्नो अडान नछाड्दा समझदारी आखिरमा केही गरी हुन सकेन । दिवशको खान्दानी संस्कार उसका लागि घरको आर्थिक अभावभन्दा महत्वपूर्ण हुन सकेन । अन्तत ः उसले नोकरी शुरु गरी । नोकरी शुरु गरेकै दिनदेखि दिवशले उसका घरपरिवारबाट कडा प्रतिकि्रया खप्नु परेको कुरा उसलाई सुनायो । त्यसैका कारण दुईबीच चिसोपन बढ्न थाल्यो । हरेक रात नानाथरीका कुराले आफ्नी श्रीमतीलाई सताउनु उसको दैनिकी भयो । घर ढिलो फर्किने कहिले खबरै नगरी दुई-चार दिन बाहिरै बिताउन थालेको दिवशले धेरै भैसकेको थियो । जसलाई उसले सामान्य मान्न थालेकी थिई ।
मंगलबारको दिन थियो त्यो । दिउँसोको एक बजे ऊ क्याम्पसबाट घर फर्किसकेकी थिई । त्यही समय पारेर दिवश घर आयो । हाउभाउले ऊ एकदमै हतारिए झै देखिन्थ्यो । उसले अचम्म मानेर आफ्नो लोग्नेलाई हेरी । ऊ आज बिल्कुलै भिन्न लागिरहेको थियो । आँखामा चमक थियो ओठमा मुस्कान भरिएको थियो । उसले आफ्नो लोग्नेको ओठमा मुस्कान नदेखेको महिनौ बितिसकेको थियो । सायद काम सुरु गरेकै दिनदेखि दिवशको मुस्कान हराएको थियो कि उसलाई हेक्का भने छैन । “एउटा कम्पनी दर्ता गराउनु छ तिम्रो नाममा खै छिट्टै साईन गरिदेउ त ।”हातमा पानीको गिलास लिदै उसले भन्यो । “कस्तो कम्पनी अनि किन यति हतारमा पहिले त केही कुरा गर्नु भएको थिएन ” एक्कासि सधैभन्दा पृथक मुद्रामा देखिएको लोग्नेलाई उसले विश्वाश गर्न सकिरहेकी थिईन । “हत्तेरीका एक घण्टाभित्रमा दर्ता गराएन भने यो मौका अर्कैले लिनेछ । यत्तिका दिन भैसक्यो मेरो टाउको यसले खाएको । कत्ति पीर थियो मलाई यसको । छिटो गर न ! म भरे सबै प्रतिलिपी लिएर आँउछु अनि सबै बेलिबिस्तार लगाउँला ।”जोशिएर बोल्यो ऊ । मानौ ठूलै कम्पनिको मालिक भैसक्यो ।
उसले केही बुझिन । तैपनि लोग्नेमा देखिएको उत्साहलाई कदर गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठानेर हतारमै सम्पूर्ण कागजमाथि हस्ताक्षर गरीदिई । अनायशै ऊ पनि आज फुरुङ्ग थिई लोग्नेको स्फूर्ति देखेर । बेलुकी लोग्ने कतिबेला घर फर्केला र सबैकुरा थाहा पाउँला भनेर दिनभरी उसले आँखा बाटोतिरै बिच्छ्याई । साँझ पर् यो घर फर्किने मान्छेहरुको लस्करले बाटो ढाकिएको थियो । मधुरो उज्यालोमा आँखाले भ्याईन्जेल लस्करभित्र उसले दिवशलाई नियाली तर ऊ भेटिएन । कहिलेकाही त रातको एक बजे पनि घर फर्किन्थ्यो । त्यसैले मध्यरातसम्म उसले पर्खिरही । यसरी नै कैयांैं दिन र रात पर्खाईमा बिते तर दिवश आएन ।
यसरी अचानक हराएको लोग्ने बीस दिन पछि घर फर्कियो । उसलाई देखेर उसका आँखा रसाएनन् उसलाई खुशीको झट्का पनि लागेन उसले मात्र हेरिरही । त्यसै पनि दुईबीचको सम्बन्ध चिसिदै गएको थियो । त्यसैले लोग्नेको अनुपस्थितिले उसलाई खासै फरक परेको थिएन । तर एका-एक कम्पनी दर्ता गराउन भनेर सहीछाप लिएर हिडेको लोग्नेको लामो अनुपस्थितिले भने उसलाई सताईरहेको थियो । यसपटकको दिवशको आगमन कुनै एक अपरिचितको झै थियो । मानौ उसले पहिलो पटक कसैसँग चिनाजानी गर्दैछ । उसले हातमा बोकेको सानो ब्यागबाट एउटा खाम झिकेर श्रीमती तिर तेस्र्यायो । कौतुहलतापूर्वक हतारिदै खाम खोलि । उसका आँखाले पृष्ठको मध्यतिर दृष्टि नपुर् याउँदै ऊ अवगत भैसकेकी थिई । दिवशले कम्पनी दर्ता गराउन तेस्र्याएका कागजातहरु त सम्बन्ध बिच्छेदका पो रहेछन् । परपुरुषसँगको सम्बन्धका कारण दुईबीचको सम्बन्धलाई अन्त्य गर्न राजी भएको व्यहोरा लेखिएको थियो ।
दिवशले पटक -पटक उसकै सहकर्मी शुरेशको बारेमा प्रसङ्ग उठाएर घरमा तनाव उत्पन्न गराउनाको कारण उसले बल्ल मात्र बुझी । यहाँ उसका ओठहरुले दिवशप्रति आक्रोश व्यक्त गर्ने उत्साह देखाएनन् । तर उसका हर धड्कनले घृणा गरिरहेको थिए । लोग्नेको तुच्छ मानसिकता र दम्भि चरित्रसँग उसलाई प्रतिवाद गर्न मन लागेन । आखिर स्वास्नीको वफादारीतालाई क्षण-क्षणमा लत्याउने एक पुरुषपात्रको आडमा जीवन बिताउन पक्कै सजिलो छैन भन्ने बुझ्न उसलाई अन्ततः धेरैबेर लागेन । त्यसैले सम्बन्ध बिच्छेदको प्रतिवाद गर्नुभन्दा स्वीकार्नु नै उचित ठानी उसले । सम्बन्ध बिच्छेदको निर्णयले क्षतबिक्षत भई पश्चातापको ज्वालामा लपेटिएर ऐया-आत्था गर्दै उसले चिच्याएको हेर्ने प्रवल ईच्छा बोकेर आएको दिवश प्रतिउत्तरमा श्रीमतीको मौनता र आत्मविश्वास देखेर अर्काे एकपटक अपमानित हुनपुग्यो । उसले मौनतामै सहजसाथ स्वीकारेको देखेर घरबाट बाहिर निस्कियो । तर उसको मनमा लोग्ने बिनाको भोलि कसरी सामु आईदिने हो भन्ने अज्ञात छटपटीले हलचल मच्चाई रह्यो ।
सम्बन्धबिच्छेदको पहिलो प्रभात । दिनचर्याको शुरुवातमा सधै झै छेवैमा राखेको घडीले किरिरिर्र� किरिरिर्र� आवाज दियो । हतारिदै उसका आँखा खुले । ऊ मन नलागि-नलागि उठी । हिजो रात बिगतले निकैबेरसम्म मानसपटललाई नमिठो स्पर्श गरेकोले झण्डै आधा रात कटेपछि मात्र उसका नयन जोडिएका थिए । मनमा अनौठो अनुभूति लहरिरहेथ्यो । फरक्क् फर्किएर रात बिताएको ओछ्यानलाई हेरी त्यो साम्रा्रज्यवादीहरुबाट मुक्ति पाएको कुनै राज्यभन्दा कम थिएन ।
बिवाहमा बुबाले मेचीबाट मगाएर दिनु भएको चाँपको पलङ्ग थियो त्यो । सिरानी र डसना पनि सिमलको नरम भुवाका थिए । तैपनि पलङ्गमाथिका ती सिरानी र डसनाले बिगतका रातहरुमा धेरै बिझाए उसलाई । कहिले नरम सिरानी पनि ढुगां जस्तो भएर बिहान उठ्दा गर्धन र शीर असाध्यै दुखेको हुन्थ्यो । कहिले मुलायम डसनामाथि अनायसै पैदा हुने गाँठागुठी बिझाएर रातभर सुत्नै अफ्ठ्यारो हुन्थ्यो । आखिर माईतीको माया न हो विवाहमा पाएको त्यो चिनोलाई फ्याँक्न सकिरहेकी थिईन ।
लोग्नेसँग छुट्टिएको पहिलो प्रभातमा सम्पूर्ण फरकहरुलाई नियाल्न मन लाग्यो उसलाई । उसले झ्यालको पर्दा उघारी । सुन्दर बिहानी पहिले जस्तै कलिलो घामसँगै झुल्किएको थियो । सडकका पेटीहरु त्यसरी नै लमतन्न भई बटुवाको स्वागत गरिरहेका थिए । मन्दिर परिसरमा घण्टीहरु उसरी नै बजिरहेका थिए अनन्तसम्म ध्वनि गुाजाएर । चराहरु खुला आकाशमा उडिरहेका थिए स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दै ।
आखिर फरक केहीमा भेटिन उसले । शायद फरक आफूमा पो आयो कि भन्ने डर थियो उसलाई । त्यसैले पलङ्ग छेउ राखेको ठूलो ऐना अगाडि उभिई ऊ । मनले निर्दोष ऐनासँग केही वैमनश्यता नभएको निक्र्योल गरेपनि त्रसित उसका आँखाहरु भने बन्द थिए । उसले बिस्तारै आँखाहरु खोली । त्यो ऐनाले उसलाई यसरी बिम्वित गर् यो कि ऊ मुक्त थिई ।
Posted in Nepali Stories	| Tagged कथा, सम्बन्धका दूरी	| Leaveareply
कथा – लोप जीन
श्रवणकुमार उसको नाम होइन । धार्मिक कथामा बाबुआमाप्रति अनन्य भक्तिका नायक जो दशरथद्वारा मारिएका थिए, अयोध्याका राजा । तर, ऊ जहाँ बस्छ त्यहाँका छरछिमेकहरू उसलाई श्रवणकुमार भनी सम्झन्छन् ।
ऊ उमेर गएका बाबुआमासित पोखरामा बस्छ । दुवै ८० लागेका ।
ऊ रवि हो । सामान्य नाम । आकाशको घामसित कुनै सरोकार छैन । सायद धर्मले हिन्दू र कर्मले पावनसिन्धु । बाबुआमाले ढिलो, ५० तिर छोरो पाउँदा सूर्य भगवान्झैँ प्रतापी होस् भन्ने प्रतीकात्मक आकाङ्क्षा बोक्छन् ।
सत्तरीतिर लाग्दानलाग्दै बाबु पूरै अन्धो हुन्छ र आमा पूरै अन्धी ।
ऊ हुन्छ श्रवणकुमार नभएर पनि श्रवणकुमार ।
क्याम्पस छुट्छ । र, छुट्छ कम्प्युटर विज्ञानमा सफ्टवेयर पायोनियर बन्ने महान् सपना पनि ।
तर, ऊ छुटेको सपनाले उदास भए पनि भेटेको विपनाले दुःखी हुँदैन । ऊ त्यस साँचोको मान्छे हुन्छ, जो बौद्धिक वातावरणमा पनि अनुकूलता प्राप्त गर्न सक्छ । उसलाई एउटै दुःख हुन्छ, ऊ बाबुआमाका गुमेका आँखा फिर्ता ल्याउन केही गर्न सक्दैन ।
सकेजति आशा बोकी ऊ बाबुआमालाई देशका सबैजसो आँखा अस्पतालहरूमा पुर्‍याउँछ, श्रवणकुमारले झैँ खर्पनमा राखी होइन, भाडाका गाडीहरूमा राखी । तर, सबै व्यर्थ ।
बाबुआमाले सजिलै स्वीकार गर्छन्, यो उनीहरूको भाग्य हो, कुनै रोग होइन र अरू आँखा परीक्षण गर्न जान अस्वीकार गर्छन् । सबभन्दा राम्रो आशा नहराएर अनन्य भक्त छोरो रिसाइदिन्छ । स्वाभाविक नै हो ।
“यहीँको एउटा अस्पतालमा एक जना जान्ने डाक्टर आएको छ, किन नजचाउने त ?” रिसाइसकेपछि छोरो फेरि रिसाउँदैन । “छोरा, हामी बूढाबूढी भइसक्याँै । बुढ्यौलीको कुनै उपचार हुँदैन ।” परम्परागत अन्धविश्वास ! फेरि नरिसाएको छोरो रिसाउँछ ।
“नरिसाऊ छोरा । हामी बाबुआमाको साँचो भक्ति गर्छौं भने हाम्रो अन्तिम इच्छा पूरा गरिदेऊ …।” ऊ बुझ्छ अविवाहित छोरोसित मायालु बाबुआमाको अन्तिम इच्छा के हुनसक्छ, त्यसैले चुप भई बस्छ । उसलाई त्यस्तो केटीमान्छेसित बिहे गर्ने मन हुँदैन, जसलाई ऊ माया गर्दैन । र, माया अझै भएको छैन कसैसित ।
मायाको पर्खाइमा बिहे अपहत्ये हुन्छ । मायाबिनाको बिहे बेकारको बोझ मात्र हुन्छ । अरू शब्दमा । तर, पर्खाइको कुनै सीमा हुँदैन । यदि माया जीवनभर पर्खाइको घटना भयो भने के गर्ने त …।
“छोरा, तिमीलाई थाहा छ हामीसित पर्खिबस्ने समय छैन । हामी डाँडामाथिका घाम, कालका दूतहरू कुनै पनि बेला हामीलाई लिन आउन सक्छन् । त्यसभन्दा पहिले नातिनातिनीका मुख हेर्न पाए …।”
बाबुआमालाई चुप भई बस्ने आवश्यकता हँुदैन, त्यसैले क्रमशः क्रमशः अन्तिम इच्छालाई व्याख्या गरिरहन्छन् ।
बढीमा महिना दिनभित्र ऊ छिमेकको एक केटीमान्छेसित बिहे गर्छ । निश्चय पनि महान् त्याग, जुन समाजले बुझ्दैन ।
बाबुआमा खुसी हुन्छन् । अब उनीहरू एकैपल्ट परत्रका लागि भगवान् भजन र वरत्रका लागि बाजेबजै बन्ने सपना देख्छन् । शौभाग्यवश बुहारी पनि लक्षणकी पर्छे, सासू-ससुरालाई राम्रै सेवा गर्ने खालकी ।
केही महिना बित्छन् खुसीहरूमा र महान् त्यागका सन्तुष्टिहरूमा । तर एक दिन ऊ अर्थात् छोरो रवि अर्थात् लोग्ने रवि बिरामी हुन्छ । पहिले कुनै लक्षण नदेखाएर । ऊ कसैलाई खबर नगरी चिकित्सककहाँ जान्छ ।
“के भयो ?” सोधिन्छ । “थाहा छैन डाक्टर तर म अस्वस्थ महसुस गर्दैछु,” ऊ भन्छ । “त्यसो भए केही नहुनुपर्ने कुराहरू भइरहेछन् । मलाई जाँच्न दिनुहोस् ।” उसलाई भनिन्छ अनि जाँचिन्छ उसको शरीरमा सबैतिर । कुनै रोग देखापर्दैन । “तपाइर्ं स्वस्थ हुनुहुन्छ । आफूलाई अस्वस्थ मान्नु तपाइर्ंको मनोविज्ञान हो ।”
उसलाई उसको जाँचको नतिजा सुनाइन्छ । नतिजा अनपेक्ष्ाित हुन्छ, अपि्रय हुँदैन । ऊ खुसीखुसी घर जान्छ र खुसीखुसी आफ्नो अस्वस्थताको कुरा बिर्सन खोज्छ । तर, बिर्सन सकिँदैन ।
“के भयो ?” यसपालि चिकित्सकले होइन, बाबुआमाले सोध्छन् चिन्तित भई । “केही भएको छैन । म एकदम ठीक छु । चिन्ता गर्नुपर्दैन ।” ऊ भन्छ, बाबुआमाका चिन्तादेखि चिन्तित भई । “छोरा, तिमी हाम्रो बुढेसकालका सहारा हौ …।” बाबुआमाले चिन्ता गर्न छोड्दैनन् । अनन्य भक्त छोरोले बाबुआमाको कुरालाई स्वार्थ भनी बुझ्न मन पराउँदैन । त्यसै दिन बाबुआमाले थाहा पाउने गरी ऊ बाहिरतिर घुम्न निस्कन्छ ।
“डाक्टर, म साह्रै नै अस्वस्थता महसुस गर्दैछु । मेरो मनोविज्ञान ठीक छ ।”
“विश्वासपूर्वक भन्दै हुनुहुन्छ ?”
“अवश्य ।” तर, चिकित्सकलाई विश्वास पर्दैन ।
“ठीक छ, म फेरि जाँच्नेछु । ढुक्क भई बस्नुहोस् । चिन्ता गरी आफ्नो एम्युन प्रणालीलाई असफल नपार्नुहोस्,” चिकित्सकले भन्छ अनि आफ्नो काम थाल्छ । उसलाई एक विशेष यामीय उपकरण ९च्यदयतष्अ भ्त्रगष्ऊभलत० भित्र राखिन्छ । ऊ बुझ्छ, यो सामान्य जाँच होइन, माने केही गम्भीर र खर्चालु कुरा छ ।
“न्भलभतष्अ म्ष्कयचमभच” यामीय उपकरणले नतिजा प्रकाशित गरिदिन्छ तर कुन खालको प्रकाशित गर्न सक्दैन ।
ऊ बुझछ, जीनमा गडबडी … ।
“ठीक छ … । तपाईंलाई मानवजीन थेरापी आवश्यक छ ।” चिकित्सक भन्छ । आफ्नो योग्यताको कुनै तहमा अन्योलग्रस्त भई । जब ऊ अस्पताल भर्ना हुन्छ, अन्धाअन्धी बाबुआमाबाट यो कुरा लुकाउन सफल हँुदैन । उनीहरू हाहाकारमा पर्छन् । रुन्छन् । बेस्सरी रुन्छन् । उनीहरूका नदेख्ने आँखाहरूबाट देखिने आँसुका खोला बग्छन् । ऊ विश्वास दिलाउने प्रयास गर्छ, उसको रोग गम्भीर छैन । त्यसैले चिन्ता चिन्ताहीन छ, शोक शोकहीन छ, दुःख दुःखहीन छ । ईश्वरमाथि भरोसा राख्नुपर्छ, जसलाई प्रार्थना गरिन्छ । अन्धाअन्धी बाबुआमा ईश्वरमाथि भरोसा राख्छन् र बलिन्द्रधारा आँसुका प्रार्थना गर्छन् । अस्पतालको शय्यामा साताभरि नै केही फरक कुरा हुन्छ । ऊ अर्थात् छोरा रवि कुनै उपचारमा गुज्रँदैन । कुरो स्पष्ट छ, मानवजीन थेरापी भनेको जीन स्थानान्तरण ९न्भलभ त्चबलकाभच० द्वारा रोगोपचार गर्ने विधि हो र यस्तो पहिलो परीक्षण सन् १९९० मा सुरु गरिएको थियो । रोगीको ब्मभलयकष्लभ म्भamष्लबकभ न्भलभ लाई द्यymउजयअथतभक मा स्थानान्तरण गरेर । किनभने यो सन्जाइमदोष Immगलभ म्भाष्अष्भलअथ तर्फ लक्षित थियो र अत्यन्त घातकसिद्ध हुन्थ्यो । तर, यहाँ खास रोग पत्ता लागेकै छैन । कुन रोगको उपचार गर्न कुन जीन स्थानान्तरण गर्ने ? अनि कहाँ ?…
ऊ चिकित्सकका निम्ति एक प्रयोगको वस्तु भइदिन्छ र आफ्ना निम्ति एक गम्भीर पाठक । विषय मात्र जेनेटिक्स ।
जीन- सन् १९०९ मा सबभन्दा पहिलो डब्ल्यू जोहानसेनद्वारा नाम दिइएको ।
मेन्डल, डब्ल्यूएस सूट्टन- जीनका शास्त्रीय धारणाहरू ।
टीएच मोर्गन- ड्रोसोफिला मेलानो गाष्ट्रकमाथि प्रयोगात्मक कार्य ।
क्रोकोजोम- त्यो माध्यम, जसबाट वशंानुगत गुणहरू सर्दै जान्छन् एक पुस्तादेखि अर्को पुस्तासम्म ।
मोर्गनको क्रोमोजोम सिद्धान्त ९ऋचomयकomभ त्जभययथ या क्ष्लजभचष्तबलअभ०- यो धारणा राख्छ कि क्रोमोजोमहरू पृथक् एकाइहरूबाट बनेका हुन्छन्, जसलाई जीन भनिन्छन् ।
जीनहरू नै विशेष गुणहरूका यथार्थ संवाहक हुन् ।
जीन उत्परिवर्तन ९न्भलभ ःगतबतष्यल० जीनको रसायनिक संरचना- डीएनए अणुहरू ।
डीएनए संरचना र द्विगुमान/क्भाि म्गउष्अिबतष्यल ।
सन्देशवाहक आरएनए ।
स्ट्रक्चरता जीन, रेगुलेटरी जीन ।
जेनेटिक कोड र प्रोटिन सिन्थेसिसको नियन्त्रण ।
जीन कन्भर्सन/जीन सक्सप्रेसन/जीन म्यानिप्युलेसन/जीन ब्याङ्क/जीन लाइब्रेरी/जीन फ्लो/जीन पुल/जेनेटिक डि्रफ्ट/जेनेटिक लोड/जेनेटिक म्यापिङ्/जेनेटिक भेरिएसन/जेनेटिक स्प्लाइसिङ्/-ट्रान्सडक्सन)
ऊ आफूलाई पूरै जीनको ब्रह्माण्डमा हराइदिन्छ । र, सोच्छ भावुक कवि भएर कि ऊ जीनको एक सानो पृथ्वी हो । तर, उसलाई के भएको छ ?
यसपालि चिकित्सकले उसलाई सोध्दैन, उसले चिकित्सकलाई सोध्छ ।
“वंशानुगत दोष,” चिकित्सकले जानकारी दिन्छ ।
“त्यो भनेको के हो त ?” उसले सोध्छ ।
“वंशानुगत दोष भनेको तपाईंको निशेषिच कोषको क्रोमोजोम जीनमा भएको दोष हो । मेरो आसय जाइगोट् सेल ।”
“के मैले बुझ्नुपर्छ जन्मभन्दा पहिले मैले अपराध गरेको थिएँ ?”
“होइन, होइन, त्यसरी नलिनुहोला । विज्ञानको सत्यतालाई भावनामा लिनुहुँदैन ।” चिकित्सक भन्छ । ऊ केही भन्दैन । उसलाई जे बुझ्नु हुन्छ पहिले नै बुझिसकेको हुन्छ । अर्को दिन अर्थात् भोलिपल्ट जब अन्धाअन्धी बाबुआमा उसको स्वास्नीको सहारा लिई उसलाई भेट्न आइपुग्छन्, ऊ बोल्न अस्वीकार गरिदिन्छ । उनीहरू बुझ्न सक्दैनन् उनीहरूको एक मात्र छोरोलाई के भइरहेछ … ।
“छोरा, हामीलाई हाम्रो मृत्यु हुनुभन्दा पहिले यसरी नमारिदेऊ…। नमारिदेऊ…। दया गर छोरा…. ।” अन्धाअन्धी बाबुआमा बिलौना गर्छन् । त्यसले उसलाई विस्फोट गराइदिन्छ ।
“मूर्ख अन्धाअन्धी ! आफ्ना अपराधी जीनहरूद्वारा आँसु नबगाउनु । म घीन मान्छु दुवैलाई ।”
स्वास्नीलाई विश्वास लाग्दैन ऊ के सुन्छे । अन्धाअन्धी बाबुआमालाई विश्वास लाग्दैन उनीहरू के अनुभव गर्छन् । तर, जीवनका यथार्थ विश्वासहरू र अविश्वासहरूभन्दा परै हुन्छ । यथार्थ घटित भइसकेको हुन्छ । कुरा त्यति नै हो ।
उसको रोगको लक्षण के हुन्छ भने कुनै लक्षण हुँदैन, अरू जीनसम्बन्धी कारणले हुने रोगहरूमा जस्तै- एजभलथपिभतयलगचष्ब। क्ष्अपभ-अिभिि ब्लझष्ब, त्बथ-क्बअजक, क्उष्लब द्यषष्मब ध्बतभच यल तजभ द्यचबष्ल आदि चिकित्सकलाई थाहा हँुदैन कसरी नवः आविष्कृत वंशानुगत गुण विक्षेपण ९त्भिचष्मष्तबचथ त्चबष्तक त्चबलsmष्ककष्यल० दोषहरूलाई सच्याउन सकिन्छ । यामीय उपकरणद्वारा साङ्केतीत समस्या के समाधानरहित छ त… ?
पहिलेझैँ नै रोगीले याने उसले अस्वस्थताको अनुभव गरिरहन्छ -अनुभव रोगको लक्षण होइन) र कहिलेकाहीँ पसिनाले नुहाइन्छ -पसिना रोगको लक्षणभन्दा बढी श्रमको लक्षण नभए मनोविज्ञान हुन्छ) । यसरी समय आशालाग्दो निराशामा चलिरहन्छ ।
यी दिनहरूमा पनि ऊ दुःखी बाबुआमाप्रति बदलिएको व्यवहार बदल्दैन । यो उसको त्यही बुझाइको प्रतिक्रिया हुन्छ कि उसको जीवन अरू केही होइन, बाबुआमाका सच्याउन नसकिने भूलहरू हुन् । तब अस्पतालमा बसिरहनुको उपयोगिता के छ ‘गिनिपिग’ भएर ?
केही छैन/केही छैन/केही छैन ।
ऊ आफूलाई अस्पतालबाट छुट्टी गर्छ । उसलाई प्रयोग गरिरहेको चिकित्सकलाई पीडादायक विषयमा पारेर ।
घर । ऊ स्वास्नीलाई चिन्छ । ऊ अन्धाअन्धी बाबुआमालाई चिन्दैन ।
“छोरा, यस्तो व्यवहार गर्नुभन्दा हामी दुईलाई घाँटी निमोठेर मारिदेऊ ।”
बाबुआमा भन्छन् बिलौना गरी गरी अनि असहायतापूर्वक सोच्छन् उनीहरूको एक मात्र छोरोलाई कुनै दुष्ट आत्माले सताएको हुनुपर्छ । श्रवणकुमार श्रवणकुमार नै हुन्छ, दुष्टकुमार हुँदैन …!
उनीहरू अन्धो आँखा चिम्लिएर प्रार्थना गर्छन् ः “प्रभो ! छोरालाई पहिलेझैँ जाति बनाइदिनुहोस् …। बरु हाम्रो ज्यान लिनुहोस् …। हजुरकै शरणागत छौँ …।”
तर, बदलीमा कुनै बदली हुँदैन । ईश्वर पुकारा जारी रहन्छ । आशापूर्वक । हो, विश्वासपूर्वक । जहाँसम्म उसको कुरा हुन्छ याने छोरोको ऊ विस्फोटित भई बस्दैन, मौन भइबस्छ ।
आफूलाई पूरै कोठामा थुनेर । ऊ भेट्न चाहने साथीहरूलाई भेट्दैन । सम्बन्धीहरूलाई भेट्दैन । छिमेकीहरूलाई भेट्दैन । किन भन्ने कुरा कसैले बुझ्दैनन् तर जतिले बुझे भनी ठान्छन् उनीहरू त्यसको सम्बन्ध मनसित जोड्छन्, “त्यस्तै हो मन ठेगानमा नभएपछि …।”
एकदिन स्वेच्छिक काराबासको तेस्रो सातामा ऊ याने छोरोले होइन, लोग्नेले स्वास्नीलाई बोलाई भन्छ, “हेर, म कुनै पनि सन्तानको बाबु बन्न चाहन्न । मेरा जीनहरूबाट जुन मैले सजायको रूपमा पाएको छु । जीनहरूको संसारमा म मेरा जीनहरू सधँैभरिका लागि लोप भइगएको हेर्न चाहन्छु । त्यसैले म तिमीलाई मनपर्ने कसैसित बिहे गरिजाने सल्लाह दिन्छु, क्षमायाचनासहित ।”
त्यस्ता कठोर वचन सुनी कसै गरे पनि असल स्वास्नीले के गर्न सक्छे, रुनुबाहेक ?
स्वास्नी रुन्छे बस्सरी । लोग्ने स्वास्नीलाई आराम पुर्‍याउन केही गर्दैन । पग्लिने त कुरै आएन । ऊ चुप भइबस्छ र आकाशको शून्यतालाई हेरिबस्छ ।
आधा रातमा उसले आफूलाई कोठामाथिको पङ्खामा झुन्ड्याइदिन्छ, सधँैभरिका लागि आफ्ना मानवीय जीनहरू लोप पार्न ।
के यो वंशानुगत भूलसुधार हो त ? मलाई थाहा छैन । मलाई थाहा छ, त्यस परिवारका दुःख र शोकलाई कुनै शब्दहरूमा बयान गर्न सकिँदैन …।
Posted in Nepali Stories	| Tagged कथा, लोप जीन	| Leaveareply